Man City oo isku dayeysa inay hesho adeega xiddig ka tisan kooxda Inter Milan – Gool FM
Dajiye May 18, 2022
(Manchester) 18 Maajo 2022. Tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa doonaya inuu xoojiyo safkiisa inta lagu jiro suuqa xagaag, waxaana ka mid ah bartimaameedyadiisa xiddig ka tirsan Inter Milan.
Sida lagu sheegay warbixin ay daabacday Football Italia, Inter Milan ayaa isku dayaysa inay sii haysato da’yarkeeda mustaqbalka leh ee Alessandro Bastoni, inkastoo ay Manchester City isku dayeyso inay hesho adeegiisa.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in maamulka Nerazzurri uu diiday dalab 60 million euros ah oo Manchester City ay u soo bandhigtay si ay u helaan adeega Bastoni, waxayna warbixinta carabka ku dhufatay in kooxda aysan awoodi doonin inay iska caabiso dalabka City haddii qiimihiisa dhaqaale uu kordho.
Alessandro Bastoni ayaa ka ciyaara daafaca dhexe, waxaana qandaraaskiisa kooxda Inter uu dhacayaa xagaaga 2024, iyada oo 23 jirkan ay in badan oo ka mid ah taageerayaasha kubadda cagta Talyaaniga u arkaan inuu yahay bedelka ugu macquulsan daafaca xulka qaranka Azzurri ee Leonardo Bonucci.
Yeelkeeda, Alessandro Bastoni ayaa ku ciyaaray maaliyada kooxda kubadda cagta Inter Milan 117 kulan tartamada oo dhan, isaga oo dhaliyay 3 gool, wuxuuna sidoo kale saaxibadiis ka caawiyay 8 gool kale.